Translator Archives - Glory Assumption Space
English To Chinese Translator – Male/Female (5)Posts /လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ်နှင့် (အထက် )
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Car Showroom တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1. English To Chinese Translator – Male/Female (5)Posts /လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ်နှင့် (အထက် ) / မရမ်းကုန်းမြို့ နယ်။
- ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - English မှ Chinese (သို့ )ဘာသာပြန်နိုင်ရပါမည်။ -သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံ (၂)နှစ်ရှိရပါမည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09977397705, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Chinese Translator – Male (5)Posts /Salary -400000 Kyats / Mayangone Township
မင်္ဂလာပါGAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ကုမ္ပဏီတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ 1.Chinese Translator – Male (5)Posts /Salary -400000 Kyats / Mayangone Township - ဘွဲ့ရ - Chinese (4) skills - ကားမောင်းနိုင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail-gasrecruit.hr4@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone	No.-09-262223783,09-977397705,09-263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ	–MyanmarProfessionalTraining Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Korea Translator – Female (5)Posts/Salary- 400000Kyats/ Shwepyithar Township
Korea Translator – Female (5)Posts/Salary- 400000Kyats/ Shwepyithar Township - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - ကိုရီးယားဘာသာစကားကိုကျွမ်းကျင်စွာပြောနိုင်ရမည်။ - အသက် ၂၈ နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည်။ - အတွေ့အကြုံ ၁နှစ်ရှိရမည်။ -စက်ရုံမှူးစကားပြန်လုပ်ပေးရမည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail-gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone	No.-09-262223785,09-977397705,09-263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ	–MyanmarProfessionalTraining Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Chinese Translator -Male (5) Posts / Salary -350000 (Above) / Mayangone Township
မင်္ဂလာပါ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည်။ 1.Chinese Translator- Male(5)posts / Salary – 350000 (Above)/Mayangone Township -	ဘွဲ့ရ -	တရုတ် စကားပြောတတ်ရမည် -	ကားမောင်းနိုင်ရမည် မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail-gasrecruit.hr4@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone	No.-09-262223783,09-977397705,09-263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ	–MyanmarProfessionalTraining Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Chinese Translator – Male (6) posts
1. Chinese Translator – Male (6) posts/ Salary- - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - Chinese Language ကောင်းစွာပြောနိုင်ရမည်။ - အတွေ့အကြုံ (3 )နှစ် နှင့်အထက်ရှိရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်ပြီး လစာညှိနှိုင်းပေးမည်။ - နေ့စားငြိမ်း စီစဉ်ပေးမည်။
Chinese Translator - Male/Female(5) Posts
********************** URGENT REQUIREMENT ************************* မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ Chinese Translator -Male / Female (5)Posts /400000 Kyats/ PazunTaung Township. -Online Purchaser လုပ်နိုင်ရမည် ။ -တရုတ်စာများကို ရေး ၊ ဖတ် ၊ ပြော နိုင်ရမည်။ -Chinese Website မှပစ္စည်းများကို မှာရန်သာဖြစ်သည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )
Marketing - Female (5) Posts
Location in : သန်လျင်
************** URGENT REQUIREMENT ****************** မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ 1. Marketing – Female (5) Posts / Salary 400000 Kyats / ThanHlyin Township Requirements - Any Graduate. - Engilsh4Skills ကျွမ်းကျင်ရမည်။ - Business Development ပိုင်းနှင့်ပက်သက်ပြီး Experience ရှိရမည်။ - Ferry ရှိပါမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ ) [caption id="attachment_347" align="alignnone" width="900"] Online Marketing Key Can Be Blogs Websites Social Media Or Email Lists[/caption]
Chinese Translator - Female (5) Posts
************** URGENT REQUIREMENT ****************** မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ 1. Chinese Translator – Female (5) Posts / Salary 500000 Kyats / Kyaut Tadar Township Requirements - Chinese4Skills ရှိရမည် ။ - Any Graduate. - အသက် 25 နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည် ။ - Computer အသင့်အတင့်ရှိရမည် ။ - Minimum of2years experience. မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )
Chinese Translator4Skills-M(5)Posts
Location in : ပန်းဆိုးတန်း
မင်္ဂလာပါရှင့်။Companyများတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါဝန်ထမ်းများအလိုရှိသည်။ 1. Chinese Translator4Skill –M(5)Posts/Salary-200000 Kyats/Pansodan Township - ဘွဲ.ရ - အသက် ၃၀ အောက်ဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ.အကြုံ ၂ နှစ်ရှိရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ - Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ - Phone No- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 - ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန်)
Thailand Translator-Male / Female(3) Posts
-တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့တစ်တစ်ခုခုရရှိရမည်။ -ထိုင်းဘာသာမှ မြန်မာဘာသာ ပြန်ဆိုနိုင်ရမည်။ -အတွေ့အကြုံမရှိသူများလည်းလျောက်ထားနိုင်သည်။
Chinese Translator – Male/Female(5)posts
တရုတ်စာ 4skills ကျွမ်းကျင်ရမည်။ အတွေ့အကြုံမရှိသူများလည်း လျှောက်ထားနိုင်သည်။
Chinese Translator (Assistants)
GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ဗဟန်းမြို့ နယ်တွင်ရှိသော Companyကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ 2.Chinese Translator (Assistants) M/F	-တရုတ်စကား ကျွမ်းကျင်စွာရေးတတ်/ပြောတတ်ရမည်။ -Computer Basic သုံးတတ်ရမည်။ -ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်သူ ဖြစ်၍အလုပ်ကိုရေရှည် လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ -အခြေခံ လစာ (300000) အထက်ပါ လိုအပ်လျက်ရှိသော Job Position များအတွက် E mail ဖြင့်၎င်း၊ လူကိုယ်တိုင်၎င်းလာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr4@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr3@gmail.com Phone No.- 09 262223784, 09 977125251,09 262555438, 09 263121101 ရုံးလိပ်စာ နေရာ ။	။Myanmar Professional Training Centre @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း၊ အမှတ် (၂၉)၊ပထမထပ်၊ လှည်းတန်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။
GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော FMI City,လိူင်သာမြို့ နယ်တွင်ရှိသော Companyကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ Translator -Chinese,Japanese,Thai,English 4skill (read,write,listen,speak) Male(or)Femal (1)post အထက်ပါ position များသည် GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Japan နိုင်ငံမှလာရောက်ဖွင့်လှစ်ထားသောကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ -Translator position များကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နိုင်နင်းကျွမ်းကျင်သူများကိုလာရောက်လျှောက်ထားရန်ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။ -အထက်ပါ position များသည် construction site များတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ -ဖယ်ရီရှိသည်။(စနေနေ့ Half time ) အထက်ပါ လိုအပ်လျက်ရှိသော Job Position များအတွက် E mail ဖြင့်၎င်း၊ လူကိုယ်တိုင်၎င်းလာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr4@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr3@gmail.com Phone No.- 09 262223784, 09 977125251,09 262555438, 09 263121101 ရုံးလိပ်စာ နေရာ လိပ်စာ ။	။Myanmar Professional Training Centre @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း၊ အမှတ် (၂၉)၊ပထမထပ်၊ လှည်းတန်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။[caption id="attachment_364" align="alignnone" width="850"] A fun concept graphic for happy workers.[/caption]
GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင်ရှိသော Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ဖော်ပြပါ ဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ အင်တာဗျုး အမြန်ဝင်ရမည်။ 1Chinese Translator Male/Female-(20)Posts - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - အတွေ့အကြုံရှိရမည်။ - အသက် ၂၅မှ၃၅နှစ်အတွင်း ဖြစ်ရမည်။ - တရုတ်စာ တတ်ရမည်။ - ခရီးသွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ -အထက်ပါ လိုအပ်လျက်ရှိသော Job Position များအတွက် Email ဖြင့်၎င်း၊ လူကိုယ်တိုင် လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
တရုတ်စကားကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ပြောဆိုနိုင်ရမည်။ -ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရရှိပြီး ကားကျွမ်းကျွင်စွာမောင်းနှင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ -အမြန်အလိုရှိသည်။